လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း)
Category Archives: လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း)
Hlaing Win Maung (Saung)
စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် (မကွေး) – ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် ၁
PLEASING MELODY 1 စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် (မကွေး) – ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် ၁။ တေးထပ် – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/lyxcv0Gm4Oue9 http://www.mediafire.com/?5adq7ob0vhwb406 ၂။ တောင်တောသာယာ – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/lyTvYQwZY47fI http://www.mediafire.com/?39pk19ufsgsispj ၃။ ဟေမာန်ညချမ်း – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/lbySbbnxzifpqq http://www.mediafire.com/?2h3t9t8gld7qqef ၄။ ကျေးငှက်မြူးစံစိမ်းလဲ့ကန် – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/l44PtEpzu8mcT http://www.mediafire.com/?7lgvcw2d1wev29l ၅။ အရုဏ်ဦး – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/lbbSWJacerIvtn http://www.mediafire.com/?2ocvvo7305tyui1 ၆။ ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် http://minus.com/lmLCho3j1QY9q http://www.mediafire.com/?9w9lmwu3vi44pbe ၇။ တိမ်ယံကွန့်မြူး – စောင်း လှိုင်ဝင်းမောင် … Continue Reading →
November 20, 2012 Snuo Mwoani အခွေ (တကိုယ်တော်) လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) Leaveacomment
ရတနာပုံ – လဝန်းအိမ် (မန္တလေး)
ရတနာပုံ လဝန်းအိမ် (မန္တလေး) မြူမှောင်ဝေကင်း – မလေးရင် (မြို့ မ) နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ – ကိုပေါ (မြို့ မ) ပျို့ဆုတောင်း – ဆရာတင်(နန်းတော်ရှေ့ ) စုံတောမြိုင် – ရွှေတိုင်ညွန့်ဆီမလူးတဲ့ပေဖူးလွှာ – စိန်ဝေလျှံ နှစ်ကံပြိုင်ဖူးစာ – ဦးဘိုခင် ရတနာပုံ – ရွှေပြည်အေး (အလင်္ကာကျော်ဇွာ) မင်္ဂလာဆုတောင်း – ရွှေပြည်အေး (အလင်္ကာကျော်ဇွာ) တီးလုံးသက်သက်များသာ ဖြစ်ပါတယ်……. ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း….. သီချင်းများကို RS နှင့် တင်ပေးသော NLS ကိုလည်းကောင်း၊ ပုံများနှင့် သီချင်းအမည်များကို လမ်းညွှန်ပေးသော ထူးထူး ကိုလည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်…..။ Download with Mediafire
June 18, 2009 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) Myanmar Oldie Albums New Myanmar Albums9Comments
ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် (အမှတ် ၃)
ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် (၃) စောင်းလှိုင်ဝင်းမောင် ငှက်မောင်နှံ ချစ်ရောင်ခြည် လှေကလေး မေတ္တာအရင်းခံ တောဓလေ့ စုံတောမြိုင် ဟေဝန်နန်း မြကြာယံ ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့် အင်တာနက်ပေါ် မွှေရင်းနှောက်ရင်း အဖိုးတန်တဲ့ မြန်မာတီးလုံးခွေလေးတွေ တွေ့လို့ ထပ်ဆင့် ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုဂံသွားတုန်းကဆို အဲဒီ သီချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း အင်မတန်မှ နားဝင်ချိုပါတယ်။ သီချင်းနာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာတွေ အနေနဲ့လည်း ဒီသီချင်းလေးတွေ ကြားရတဲ့အခါ ငါမြန်မာပါလားဆိုပြီး ဂုဏ်မယူနိုင်ရင်တောင်မှ သတိတရ လွမ်းဆွတ်မိကြမှာ အမှန်ပါ။ သီချင်းတွေက အတီးသက်သက် Instrumental လေးတွေပါ။ (Author by NLS) ခြောက်ကြိုးကဝေ ရှိသလိုမျိုးပဲ……အခုကတော့ ၁၆ ကြိုးကဝေလို့ လည်း ပြောလို့ရပါတယ်…..ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာတူရိယာကို … Continue Reading →
June 17, 2009 sayargye အခွေ (တကိုယ်တော်) လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) Myanmar Artist New Myanmar Albums 15 Comments
လှုိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) – ရာသီတော်ဦး
June 14, 2009 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) Myanmar Artist New Myanmar Albums7Comments
လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) – ကျူးဧငြိမ့်ငြိမ့်
စောင်းပညာရှင် ဦးလှိုင်ဝင်းမောင်ရဲ့စောင်းလက်သံများဖြစ်ပါတယ်…. သီချင်းနာမည်တွေတော့ မသိဘူးဗျာ….
June 14, 2009 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) လှိုင်ဝင်းမောင်(စောင်း) Myanmar Artist New Myanmar Albums 8 Comments